Usoro na ọnọdụ nke Weekly Monday Match |
Usoro na ọnọdụ nke Weekly Monday Match
Nke a nkwalite ga-abụ n'etiti 00:01 na 23:59 5nke, 12nke, 19nke na 26 September 2016 (GMT).
Iji ruo eruo maka bonus, Player ga-edebekwa na Wager a nke kacha nta nke £ 10 ma kpọọ on ọ bụla oghere egwuregwu.
A bonus nke 100% nke mbụ unu nkwụnye ego ruo a kacha nke £ 50 a ga-agbakwunyere na player akaụntụ.
Player ndị ruo eruo inweta iru eru otu ugbo n'oge na nkwalite oge.
Usoro na ọnọdụ Of 100% egwuregwu
Usoro na ọnọdụ nke Up ka £ 500 Daily Match